Information Management Staff ( Male ) | Job in Myanmar ﻿
Company MobiTel Communication Co., Ltd.
Learn Knowledgeမိမိတို့၏ MobiTel Communication Co.,Ltd. သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အဓိက လုပ်ငန်းအနေနှင့် မိုလ်ဘိုင်းဖုန်းများကို ဖြန့်ချီရောင်းချသော လုပ်ငန်းအားလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိစုစုပေါင်း ဝန်ထမ်းအင်အား ၁၀၀ ကျော်နှင့် လည်ပတ်နေပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ Samsung, Huawei, ASUS, Nokia နှင့် I-phone ဟန်းဆက်များကို ဖြန့်ချီရောင်းချ ပေးနေသည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးသော ASUS Zenfone များကို တစ်ဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖြန့်ချီရောင်းချလျှက်ရှိပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ အအောင်မြင်ဆုံး နည်းပညာ ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် FPT ကုမ္ပဏီနှင့် ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်အောင် ကြိုးစားလျှက်ရှိပါသည်။
Job ads in Telecom jobs and in Yangon (Rangoon)
Business Executive ( Male / Femle )
Staff Nurse (IPD) (For Mandalay Hospital) M/F (11)
Estate Management Manager
Information & Registration Trainee
Supervisor- Call Center(Male)
Information & International Relation Officer
Management & Project Manager
Rakhine State 34 Days
Talent Management & Employer Branding
Showroom Staff (Yadanar More & More)